Oonodoli beZelex-Onodoli abaThengisa iSilicone seSex eBalaseleyo kwi-Intanethi | iiurdolls
Araceli 170CM C-Cup Zelex Intloko entle yamabele unodoli weSilicone Sex
UFrida Alluring Feminine TPE SE Unodoli 157cm H-Cup Smooth Touch Bloodshot Labia Amehlo Anomtsalane Onodoli abaThengisiweyo Camille Light Tan Packing Ubungakanani (cm) 153*40*30
Violeta Erect Clitoris Silicone ZELEX 170cm E-Cup Bloody Labia Seductive Soul Quilent Temperament Big Breast Love Doll
I-Addisyn Enchanting Body Silicone ZELEX Doll 170cm E-Cup Erect Clitoris Enomtsalane kunye neModeli eshukumayo yoMzimba Amabele amakhulu anzulu Ingqolowa ethanda ooDoli abaThengisiweyo.
I-Emerie Dark Brown Honey Hole Oonodoli beSini abaThengisiweyo Isilingo esikhulu sesifuba Labia Silicone 170CM Isimbo sasehlotyeni iinwele ezinde eziluhlaza
Ivory Cool Okwenyanisayo Uthando unodoli webele elikhulu Ilanga iModeli yowesifazane weSilicone 170CM ezimhlophe ezinde zeenwele ezithe tye ubomi bokwenyani Replica mzuzu
IHaley eshushu iThengiso ngoBomi bokwenyani iSex Doll Dark Pink Labia 170CM Sky Blue Skirt Big Breast Silicone GE45-Deep Wheat
Noelle 155CM C-Cup Zelex Doll Silicone Head GE70 Universal Skin Sexy Silicone Sex unodoli
UJillian 165CM F-Cup Zelex Head Big Butt Silicone Sex Doll
Freyja 170CM C-Cup Zelex Intloko Big Amehlo Silicone Sex Doll
Marisol 165CM F-Cup Zelex Intloko Curls Iinwele Silicone Sex Doll
Hadleigh 165CM F-Cup Zelex Intloko yeNdalo yeSikhumba seSilico seSinodoli
Elina 165CM F-Cup Zelex Intloko eNgqongileyo yeNwele yeSilicone yeSex Doll
I-Silicone Real Doll High-end Zelex Sex Dolls Lifelike Love Dolls
OoNodoli beZelex igxile kwindibaniselwano egqibeleleyo yomfanekiso oqingqiweyo wemveli kunye nemodeli yedijithali ye-3D. Ukusuka kumfanekiso oqingqiweyo wodongwe ukuya kwimveliso egqityiweyo, uZelex unikela ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha kwaye wamkela iiodolo ezilungiselelweyo. Unodoli weZelex abathandi ngoku banesizathu sokuvuya! Ivenkile yethu ye-sex ye-urdolls.com ye-intanethi iyaziqhenya ngokukhulula ekugqibeleni UZelex uthanda oonodoli.
Ukuthandana noonodoli beZelex bokwenyani abakunika uchuku lokwenyani
Unodoli weZelex uyaziwa kakhulu idilesi yesilicone yesini kwishishini loonodoli besini. Lo nodoli ngowohlobo lweZelex Doll. Lo nodoli wenziwa ngayo yonke isilicon, nto leyo ethetha ukuba ukuthembeka kwalo nodoli kuphezulu kakhulu. Ngoko ke, ixabiso likwaphezulu kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iimveliso. Ubukhulu becala $2,000+, kodwa xa ucinga ukuba kubaluleke kangakanani ukuba nenyani unodoli wesondo intombi ekunika touch yokwenene, intle cool.
Igama lebrand:Unodoli weZelex
Material: IiDolls zesondo eziSilicone Uhlobo: Oonodoli beSitayile saseYurophu, oonodoli beSitayile saseAsia, oonodoli beSini samabele amakhulu, oonodoli beSilicone kunye nokunye.
Intshayelelo: Umgangatho ophezulu we-silicone thanda unodoli unodoli wesondo wangempela - oonodoli beZelex
I-ZELEX yenye yeebrendi ze-silicone ze-AXB. I-Zelex Doll ngumenzi okhethekileyo kuyilo kunye nokuveliswa koodoli be-surreal. Injongo kukuphuhlisa oonodoli bobulili obufana nobomi bokubonelela abathengi ngamava akhethekileyo. Imveliso nganye yeZelex ipeyintwe ngesandla ngumzobi, eneemilo eziyinyani kunye neziphumo ezigqwesileyo zokuhombisa.
+ Unodoli weSilicone okwiMgangatho oPhezulu
+ Oyena unodoli we-silicone onexabiso eliphantsi
+ Uphando olomeleleyo kunye namandla ophuhliso
+ Yiba nestudio sayo sophuhliso, nesibindi sokwenza ngokwezifiso